Iindiza ezintsha ezivela eTel Aviv ukuya eMorocco, eBahrain, eSaudi Arabia, e-UAE-kunye nokukhula
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba eziziiNdaba zokuHamba » Iindiza ezintsha ezivela eTel Aviv ukuya eMorocco, eBahrain, eSaudi Arabia, e-UAE-kunye nokukhula
Airlines • isikhululo • Iindaba zeBahrain Breaking • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zase-Egypt eziQhekezayo • Iindaba zikaRhulumente • I-Israel Iphula Iindaba • IJordani Breaking News • Iindaba eziNqabileyo eMorocco • Iindaba zaseSaudi Arabia zokuPhula • komzila Ngoku • Iindaba eziHlangayo ze-UAE • Iindaba ezahlukeneyo
Ukudibanisa ngokuthe ngqo iTel Aviv kunye neenqwelo moya e-UAE, Morocco, Saudi Arabia naseBahrain kuya kwandisa ukufikelela kwezokhenketho kuMbindi Mpuma.
Ilizwe lama-Israyeli liye laba likhulu kakhulu kunye nomongameli wase-US uTrump ethetha-thethana ngoxolo kunye nenani elikhulayo lamazwe akuMbindi Mpuma kunye neGulf Region.
I-America yokuqala sisiqubulo sika Mongameli wase-US u-Trump kunye neendlela zokuthengisa izixhobo kuba kulindelwe ukuba onke la mazwe ngoku azakuvunyelwa ukuba afumane izixhobo zomkhosi e-US Oku kulunge kuqoqosho olugulayo lwase-US kodwa kuyingozi xa kuphunyezwa ngokukhawuleza kwaye Injongo yokuphumelela ukhetho lwase-US.
Kwangoko, kulandela isibhengezo esenziwe nguMongameli wase-US uDonald Trump ngesivumelwano soxolo phakathi kuka-Israyeli ne-United Arab Emirates, umcebisi omkhulu we-White House u-Jared Kushner watyhila ukuba amazwe amabini ase-Arab avumile ukuvula isibhakabhaka sawo ukuhambisa iinqwelomoya ukuya nokubuya kwa-Israyeli, kubandakanya neBahrain, emiselwe ukujoyina ukutyikitywa kwesivumelwano se-UAE-Israeli.
I-Morocco ne-Israel zimiselwe ukuseka inqwelomoya ngqo njengesiqhelo kulwalamano lweArab-Israel, iJerusalem Post umbiko ngoMgqibelo.
Ingxelo le ivele njengenxalenye yeenzame zokumisa iArabhu ne-Israeli ezamiselwa ngabaphathi bakaTrump emva kokufikelela kwisivumelwano se-UAE ne-Israeli. Ukutyikitywa kwesivumelwano kucwangciselwe ukuba kwenzeke e-White House kwangoko ngoLwesibini olandelayo.
Nge-15 ka-Agasti, i-Times yakwa-Israyeli yaxela, icaphula amagosa e-US angaziwayo, ukuba iMorocco iya kuba lilizwe lama-Arabhu elilandelayo ukubuyisela ubudlelwane kunye neTel Aviv, emva kwe-UAE. Nangona iMorocco ingenalo ubudlelwane obusemthethweni no-Israel, kukho ukhenketho kunye nobudlelwane bezorhwebo phakathi kwala mazwe mabini. Ukongeza, amaJuda aseMorocco ayindawo yesibini ngobukhulu yamaYuda kwa-Israyeli, emva kwamaJuda aseRussia, agqitha kwisigidi esinye sabantu.
NgoLwesithathu, umkhwenyana kaTrump kunye nomcebisi omkhulu we-White House, uJared Kushner, uxelele oonondaba ukuba iSaudi Arabia neBahrain bavumile ukuvula isibhakabhaka ngenqwelomoya ukuya nokubuya kwa-Israyeli.
NgoLwesihlanu, u-King Hamad bin Isa Al Khalifa wase-Bahrain ubhengeze ukuba uyavuma ukujoyina utyikityo lwango-Lwesibini loxolo lwe-UAE-Israeli. I-UAE kunye neBahrain ziya kuba lilizwe lesithathu nelesine lama-Arab, ngokwahlukeneyo, ukulungisa ubudlelwane kunye no-Israyeli.
Kwixesha elidlulileyo, yi-Egypt ne-Jordan kuphela ezazinobudlelwane obusemthethweni neTel Aviv, kodwa nakwi-Qatar Israel iiofisi zorhwebo ezisebenza emfihlakalweni zazikhona iminyaka.